Njengoba yaziwa, iphalishi zommbila oluthile lokudla iyasiza futhi ayiqukethe esiningi carbohydrate. It is kakhulu baziswa abantu ababuka for sibalo sakhe, ngoba amagremu 100 umkhiqizo iqukethe kilojoule 86 kuphela. Ngaphandle corn iphalishi kugaywe ngokuphelele futhi ongenalo umthwalo esiswini. izazi zokudla abaningi batusa okungenani kanye ngesonto ukusebenzisa lo mkhiqizo in ukudla. Namuhla sizokubonisa indlela ukupheka cornmeal iphalishi multivarka e "Polaris". Lokhu dish ngeke nje simnandi kakhulu futhi elimnandi, kodwa futhi phezu plate izobukeka a isithandwa yangempela, ukuthi, akungabazeki, izingane bayokwazisa.
Polenta e multivarka "Polaris"
Njengoba isidlo okuphekwe kule iresiphi elizoba dish side ukuze inyama, thina ngeke kukho nge ubisi noshukela. Sebenzisa okufanayo sizakwenza izithako ezilandelayo: inkomishi corn okusanhlamvu, 3.5 izinkomishi zamanzi ethafeni, ushizi kusetshenzwe, ibhotela nosawoti ukunambitha.
Iqolo wageza ngokucophelela izikhathi eziningana ngamanzi bese uthele pan Multivarki. Ukunambitha uhlanganise ibhotela kanye nosawoti. Gcwalisa izinkomishi ezintathu nengxenye yamanzi, uvale lid futhi uvule "Buckwheat" Imodi. Ukuze silungiselele isignali umsindo iphalishi. Ngemva kwalokho, ivuse okuqukethwe pan Multivarki, engeza oqoshiwe zibe izingcezu ezincane ushizi kusetshenzwe. Siyaligodla iphalishi ukuze uthole enye i ngekota yehora imodi bafudumale. Uma ngasizathu simbe ukuvumelana izitsha ukuze uthole uketshezi kakhulu, uvale lid wasiqashisa yenza i iphalishi cishe isigamu sehora. Delicious corn iphalishi e multivarka "Polaris" isilungele. Kodwa kulabo abangakholwa kuyoba ngaphezu kakhulu inyama izitsha, futhi uzobe kuhlanganiswe kahle yemifino salads. Bon appétit!
Dairy corn iphalishi e multivarka "Polaris"
Uma kanye namalungu omndeni wakho kukhona nayizimfundamakhwela iphalishi yobisi ngesidlo sasekuseni, ungakwazi ngokushesha futhi omnandi ukupheka kusuka corn oluthile lokudla, usebenzisa multivarka. Njengoba izithako sizodinga mikhiqizo: isigamu ilitha ubisi, isigamu inkomishi corn oluthile lokudla, ababili wezipuni ushukela, ibhotela kanye nosawoti ukunambitha.
Ngigezisise corn oluthile lokudla. Phansi kastyuli Multivarki amafutha ne bhotela, futhi hhayi ukuba ashise iphalishi, shiya kube izingcezu ezincane ezimbalwa. Thela wokudla, uthele ubisi, ushukela, usawoti kanye uma babefisa ngisho uwoyela. Hlanganisa wonke izithako, kuhlanganise imodi ye "Ubisi iphalishi" futhi ulungiselele ukudla ngaphansi kwehora. Emva isignali futhi uhlanganise okuqukethwe pan Multivarki, ukumboza isivalo bese ukunikeza phisa cishe ihora. Polenta e multivarka "Polaris" ulungile! By endleleni, uma ufuna ukunika lolu isidlo ukunambitheka owengeziwe futhi kwenze kube okunomsoco nakakhulu, ungakwazi ukwengeza omisiwe izithelo, uju noma amantongomane. Bon appétit!
Indlela ukupheka iphalishi elenziwe zommbila oluthile lokudla ushizi e multivarka
Uma ufuna zithokozise isidlo esimnandi okunomsoco futhi unempilo, sebenzisa iresiphi wethu olandelayo. Ngaphambi ukupheka, esizolungisa izithako ezidingekayo ngesimo 150 amagremu fake kutsho corn oluthile lokudla, 100 amagremu Adyg ushizi, parsley fresh futhi esincane ibhotela.
Hlikihla on a grater amaqhafuqhafu ushizi Adygei. Bunch of fresh parsley hashaza, obsushivayut kanye Chop fake. Kufaka multivarka Imodi "Melting" at lokushisa 140. I isitsha lisebenze ekhishini ugcwalise ingxenye litre amanzi, usawoti kanye imenze ngamathumba. Ngo amanzi abilayo ngokuqapha uthele corn oluthile lokudla ugovuze ngesipuni sokhuni noma spatula, upheke ihora. Ngemva kwalokho, engeza yashizi ushizi, ibhotela kanye parsley futhi isiyaluyalu. iphalishi okumnandi ulungile! Lokhu dish uphelele ukudla kwasekuseni, bazobe sebecela ukuthi kokubili abadala kanye amalungu omncane of nomndeni wakho.
Recipe corn iphalishi nge ithanga e multivarka
Ummbila oluthile lokudla pretty umkhiqizo jikelele futhi luhambisana kahle hhayi kuphela ubisi, ushizi nebhotela, kodwa futhi, ngokwesibonelo, nge imifino. Sikunikeza iresiphi for ithanga oatmeal. Ukuze ukudla, sidinga izithako ezilandelayo: 1 multistakan corn oluthile lokudla, isigamu ilitha ubisi esilinganayo amanzi, 250 amagremu of ithanga uginindela, usawoti kanye noshukela ukunambitha.
Epanini Multivarki ukusakaza kahle wageza oluthile lokudla, vukuza on a grater amaqhafuqhafu ithanga uginindela, ushukela, usawoti, sigcwale amanzi bese ubisi. Inika "wokukucima" futhi balungiselela iphalishi ngehora elilodwa. Ngemva ibhiphu ugovuze okuqukethwe Multivarki, vula imodi "Ukushisa" futhi ushiye isidlo zethu imizuzu 20-30. Liphalishi ilungele ukukhonza. Bon appétit!
Namuhla, sakhuluma ngokuthi indlela uzilungiselele corn incumbe. Recipe multivarka lapho lokhu isidlo kuvela ezihlwabusayo kakhulu, it is akupheleli kuloku isethi nendinganiso eyodwa izithako, ukuze ukwazi ukhululeke uzizamele.